ကျော်လွင်အောင် - ကော့သောင်း ၊ သုံးဆူနဲ့ ဟွေ့မလိုင်းနေ့ရက်များ - MoeMaKa Media
Home / 8888 / Community / Experience / Kyaw Lwin Aung / ကျော်လွင်အောင် - ကော့သောင်း ၊ သုံးဆူနဲ့ ဟွေ့မလိုင်းနေ့ရက်များ
ကျော်လွင်အောင် - ကော့သောင်း ၊ သုံးဆူနဲ့ ဟွေ့မလိုင်းနေ့ရက်များ
8888 သပိတ် သပိတ် မှောက် မှောက် (၁)
ကျိုက်သုတ်သပိတ်စခန်းက ကျော့မှုးတို့ စတည်းချတဲ့နေရာ။ ကျိုက်သုတ်ဘုရားပေါ်မှာ သပိတ်လူငယ်ခလေးတွေကို Demo ကကြီး ခခွေး သင်တန်းလေး စတည်ဖြစ်တယ် အခါအားလျော်စွာ ကြေငြာချက် တွေထုတ်ဖြစ်တယ်။ 83 ရဲဘော်တွေ သိုင်းသိုင်းဝန်းဝန်းနဲ့ အောက်လမ်းမကြီး မာစတာကျူရှင်ခန်းကျဥ်းကျဥ်းလေးမှာ
အလုပ်တွေ လုပ်ဖြစ်တဲ့အထဲ ကိုဘဲဥ (ကိုကျော်မြင့်လွင်/ ထူးအိမ်သင်/ကိုငှက်ကြီး)ကလည်း တက်ကြွပါဝင်သဗျ။
လယ်သမားသမဂ္ဂဖွဲ့ဖို့ စည်းရုံးရေးဆင်းရအောင် ကိုထူးရေ ဟော့ဒီက အဘတွေနဲ့ ဘီလူးကျွန်းဘက် လိုက်သွားဗျာ ဆိုတော့ 'အိုကေ' တဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ။
88 စက်တင်ဘာလ အလယ်ပိုင်းလောက်မှာ တ​ပြည်လုံးက ယောကျာ်းသူငယ် အတော်များများ ရန်ကုန်ကတဆင့် မော်လမြိုင်ဘက်ဆင်းလာတယ်။ တစ်ဖက်ကမ်းကို ကုန်းလမ်းကသွားချင်ရင် လမ်းပြရှာပေး စရိတ်ထောက်ပံ့တာဝန်တော့ ကိုဇော်ကပဲ ရှာ ထင်ပါရဲ့။ အခု ရောက်လာတဲ့ ဒီအုပ်စုရဲ့ အိမ်ရှင်က ကိုသောင်း၊ ကျော်ကျော်တို့ ရပ်ကွက်ကလည်း ညီသမို့ တကယ့် ပျော်ပွဲစား သပိတ် စခန်း နံပါတ် (လေး) လို့ အမည် ပေးကြတယ်။ ပွဲတော်ကြီးအလား မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ပေါ့။
သူတို့က လှေနဲ့ ရေကြောင်းက ဆင်းမယ်တဲ့လား။ ဘုရား ဘုရား ဘုရား။ နောက် နှစ်ရက်လောက်ကြာတော့ 'သွားကုန်ကြပြီ'တဲ့။ ကြက်ဆင်(ဝင်းကျော့မှူး)နဲ့ မျောက်(မင်းနောင်) တို့ နှစ်ကောင်ပါ ပါသွားသတဲ့ (အတို တစ်လက်ပါ ပါသွား)။ ဆက်သွယ်ဖို့ သဲလွန်စတော့ ပေးခဲ့တယ်ဆိုပဲ။
ဒီလိုနဲ့ တို့လည်း သွားဖို့မဝေးတော့ကြောင်း အားလုံးအသိ။ လမ်းကြောင်းရွေးတော့ ရှေ့နည်းအတိုင်းပေါ့ ။ အဏ္ဏဝါလိုင်း။ သံဖြူဇရပ်သမဂ္ဂနဲ့အရင်ချိတ်ဆက်။ မလမ မီးရထားသမဂ္ဂကတော့ ကိုယ်တွေဦးစီးပြီးဖွဲ့ပေးခဲ့တာမို့ ကုလား ကိုငယ်ကို သံချောင်း ခေါက်ခိုင်းထားပြီးသား။
ကဲ... ဒီကနေ့ တပ်က အာဏာသိမ်းတဲ့နေ့။ ဟုတ်ပြီ မနက်ဖြန်သွားမယ် ကိုဇော်ရေ ရန်ပုံငွေလေး ဆိုတော့ ညနေပိုင်းမှာ လွယ်အိတ်အနီရောင်လေးထဲ ပလပ်စတစ်ပတ်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံ လေးငါးခြောက်ထုပ်ထင်ရဲ့ ထည့်လို့
ကိုဇော်ရောက်လာတယ်။ ဘယ်သူတွေ လိုက်မလဲ။ လိုင်းကားနဲ့က လေးယောက်သွား။ ကျန်တဲ့လူတွေ ကိုကျော်နဲ့အတူ ရထားနဲ့ လိုက်မယ်။ သံဖြူဇရပ်မှာ ဆက်သွယ်ရမယ့် လိပ်စာနဲ့ စကားဝှက်က (?)။
နောက်နေ့ မနက်ပိုင်း (တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်နေ့) ဝန်ထမ်းဆန် ဆင်းဝယ်ရန် ခေါင်းစဥ်နဲ့
သံလမ်းပြေးယာဥ် RGC တစ်စင်း သံဖြူဇရပ်ဘက် ဦးတည်ထွက်ချလာပါတယ်။ ကိုကျော်တို့တစ်သိုက်လည်း
8888 - ထွက်တော်မူ တို့မြေကခွာတယ် (၂)
သံဖြူဇရပ်မှာ တစ်ပတ်လောက် အောင်းနေရတယ်။ အဲဒီက ကျောင်းသားသမဂ္ဂက လူညီတယ် တက်ကြွ လျို့ဝှက်မှုရှိတယ် ။ မလမ-ရေး ကားလမ်းဘေးအိမ်က အခန်းလေးတစ်ခုမှာ စားသောက်ချိန်ရောက်ရင် တရုတ်ဆိုင်က ဟင်းတွေ ဝယ်ကျွေးကြရှာတယ် ။ သွားဖို့အစီအစဥ် သူတို့ဆွဲတယ်။ လူဘယ်နှစ်ဦးလိုက်မလဲ တိုင်ပင်တော့
မုဒုံ+သံဖြူဇရပ်+ကျိုက်ခမီ က 'ရဲရောင်သန်မာ' ယောကျ်ားသားတွေချည်းသွားမယ်။ အိုနာကျိုးကန်းအပြင်
အထူးသ​ဖြင့် မိန်းကလေး တစ်ယောက်မျှ မလိုက်ရ'။
ပွဲနဲနဲကြမ်းသွားတယ် ။ မယ်တက်ကြွ မစွာတေးတို့ နှုတ်ဆိတ်ကုန်တယ်။ ဒါ First Rule စည်းမျဥ်းပဲ။
ကိုယ်တွေရဲ့နှုတ်ထွက်စကားက အတည်။ "ဟေ့ ရရင်ရ မရရင်ချ" မယ်ကွ။ ဒါတော်လှန်ရေးစစ်ချီထွက်တာ။
ပစ်ကနစ် မဟုတ်ဘူး။ ဟန်းနီးမွန်း ထွက်တာမဟုတ်။ အပန်းဖြေခရီးမှ မဟုတ်ဘဲ။
အဖိတ်နေ့ ညဦးပိုင်း ကျိုက္ခမီဘက်အထွက် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ လူစုအိပ်ကြတယ်။ နောက်နေ့ တော်သလင်းလပြည့် ည ကိုးနာရီလောက်၊ တစ်ယောက်ချင်းစီ ခပ်ကျဲကျဲ သံဖြူဇရပ်အထွက်။ တပ်ဂိတ်တစ်ခုအလွန် ရာဘာတောထဲက ဘေးဝဲယာနောက်ပိတ် မိုးကာချထားတဲ့ သစ်သားဘော်ဒီနဲ့ ကားသုံးစင်း​ပေါ် ဆန့်သလောက်တက် ။ တစ်စင်းပြည့် ထွက် ။ ကားပေါ်ကဆင်းတော့ ကျိုက္ခမီနားက 'ဆင်တောင်'ခြေကိုရောက် ။
လမ်းပြတစ်ယာက်နဲ့ ခရီးဆက် ။ ဆင်တောင်ပေါ်တက်လို့ ပင်လယ်ဘက်ကိုအဆင်း ကမ်းခြေ ...
"အလိုလေး! လှလိုက်တာ အရှေ့တောင်ဘက်ယွန်းယွန်းက ထွက်လာတဲ့ လပြည့်ဝန်းအောက်မှာ ကျောက်လွှသွားစွန်း လွင်ပြင် ။ အဲဒီအလွန်မှာတော့ မဲမဲမှောင်နေတဲ့ ပင်လယ်ရေ ပြင်။ ဘယ်မှာ ကျောက်ချထားမှန်းမသိတဲ့ လှေဆီကို ပို့ပေးမဲ့ကဲ့လှေစက်သံက တစ်ဖြောင်းဖြောင်း။ လမ်းပြသွားတဲ့နောက် ခြေရာထပ်ရင်း ရေစပ်ကိုအသွား။ နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ လမင်းကြီးရဲ့ အလင်းအောက် လူတန်းရှည်က ကွေ့ကွေ့ကောက်ကောက် တစ်ချို့က တောစပ်က ထွက်လာနေတုန်း။
ဒီလိုနဲ့ ကမ်းရိုးတန်းသွားလှေဆီ ပဲ့ချိတ်နဲ့အသွား။ ပင်လယ်လှိုင်းတွေက ကိုယ်နဲ့ တစိမ်းပြင်ပြင်။ လှေကြီးခေါင်မိုးပေါ် လေကွယ်နေရာလေးတစ်ခုမှာ စရိတ်ငွေနဲ့ အဝတ်တစ်စုံထည့်ထားတဲ့ လွယ်အိတ်လေး ခေါင်းခုပြီးလှဲနေတုန်း ။
"ဝုန်း ဒုတ်ဒုတ် ဒုတ်ဒုတ်" နဲ့ ဒီမို ​​​တော်လှန်ရေးခရီး လှေ စ ထွက်ချိန်မှာတော့ ကောင်းကင်မှာ ခုနစ်စင်ကြယ်ပြောင် အ​မြီးရယ်ထောင်လို့။
Three days with two night တဲ့ ။ ရနောင်းကို ပုံမှန် ရောက်မယ့်အချိန် နှစ်ညအိပ် သုံးရက်ပေါ့။
လှေထွက်ပြီး ဒုတိယည ဆယ်နာရီ​လောက်မှာ လှေရဲ့ ဒလစပ်ခုတ်နေတဲ့ စက်သံက ဖွတ်ချက်..ဖွတ် ဖွတ် ဆို ထိုးရပ်သွားလေရဲ့ ။ လှေကတော့ လှိုင်းကြက်ခွပ်သာသာ ရေပြင်ပေါ် မျောချင်ရာ မျောနေရှာပေါ့။
မနက်စော အောက်ဆင်းတော့ အိုးသူကြီးပါမကျန် စက်ဘေးမှာ ဝိုင်းကူလုပ်နေကြလို့ လစ်ဟာနေတဲ့ ကွက်လပ် ဝင်ဖြည့်လိုက်တယ်။ 'ဟေ့ ဆန် ဆေးကြ' 'ထမင်းအိုး တည်လိုက်ကြစို့'။ ငါးခြောက်ချက် ခပ်စပ်စပ်လေး တစ်ခွက်ချက် ကုလားပဲဟင်း နဲ့ လှေရှိလူကုန် ကျောင်းသား လှေသား အယောက်လေးဆယ်ကျော်စာ စီမံချက်ပြုတ်ရတာ လွယ်တော့မလွယ်ဘူး အဟူး! ။
ဆိုပါစို့ ... လှေရဲ့စက်ပြန်ကောင်းသွားချိန် " ဝူး " 'ဟေး' ကနဲ ဝိုင်းအော်ကြ ပင်လယ်ပြင်မှာ တတိယမြောက်ည ဖြတ်သန်းဖို့ နေလုံးကြီးက ပင်လယ်ကို နှုတ်ဆက်နေခဲ့ပြီ။
ပထမအစီအစဥ် - ကျိုက္ခမီက အနောက်တောင်ဘက် ဦးတည် နိုင်ငံတကာ ​ရေပြင်ပိုင်နက်ရောက်အောင် တောင်ဘက်ချိုး​ ပြီးမှ တစ်ခါပြန် အရှေ့စူးစူးမောင်းရင် ရနောင်း(ကော့သောင်း တစ်ဖက်ကမ်း)ရောက်ပေါ့ ။ This is Plan A ။ ခုတော့ စက်ပျက်လို့ လှေမျော ဘယ်ကိုရောက်လို့ ဘယ်ကိုဆက်ဦးတည်မယ် အတိအကျမသိ ထင်ကြေးနဲ့ ရမ်းပြီး အရှေ့တောင်စူးစူးကို ခုတ်လာလိုက်တာ နောက်နေ့လင်းအားကြီးမှာ ဘိတ်ကျွန်းစုထဲ ဝင်လာခဲ့ ။
'ဟာ ဇာဒက်ကြီးကျွန်း (ရေတပ်စခန်း) နဲ့နီးနေပြီဟေ့ 'မလှုပ်ကြနဲ့ စကားမပြောနဲ့'အားလုံး တိတ်သွားကြ ဝပ်နေ ကုပ်နေ။ မိုးနှောင်း လှိုင်းအလတ်စားတို့ ကခုန်ချိန် လှေကို ရိုက်ပုတ် ကျီဆယ်တဲ့ တဗြန်းဗြန်း ရေပန်းဖွားတွေနဲ့သာသာယာယာပဲ ညတစ်ည အလွန် နောက်တစ်နေ့မှာ "ဒီနေ့ မိုးမချုပ်ခင်လောက် ရောက်နိုင်မလား?" ဆလင်ကြီးကိုမေးတော့ စက်ကိုညှာလို့ သိပ်ခရီးမတွင်ကြောင်း နဲ့ နောက်နေ့ လင်းလင်းချင်းချင်းမှ ရနောင်းကမ်းဝင်မယ် တဲ့။
ဂလိုနဲ့ လေးညအိပ် ငါးရက်မြောက်နေ့မှာ ရနောင်းကမ်းနားက ဒီလှေဆိုက်နေကျ ဂိုဒေါင်မှာ ဆိုက်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တွေလာပါဆိုလို့ ကိုယ်နဲ့ သံဖြူဇရပ်က တစ်ယောက် ကမ်းပေါ်တက်ပါတယ် ။ ထောင်ကဲလင်မယားက "ဘယ်နှယောက်လဲ ထမင်းထုတ်​ဝေမလို့" တဲ့။ အားလုံးစားသောက်ပြီး တည်းရမယ့် ဂိုဒေါင်ကို ကားနဲ့
ကူသယ်ခေါက်သယ်ပို့ပေး။ စားဖို့ ဆန် ပဲ အိတ်တွေ ဆီ ဆား ငါးခြောက် ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုတ်တွေ ချက်ပြုတ်စားသောက်ဖို့ အိုးခွက်ပန်းကန် မီးသွေးမီးဖိုခပ်ကြီးကြီး စတာတွေ ​အပြည့်အစုံ စီစဥ်ပေးပါတယ် ။ တကယ့်မိတ်ဆွေကောင်းတွေပါ။
အောက်ထပ်မှာ ကုန်တွေအပြည့်လှောင်ထားပြီး အပေါ်ထပ် အခန်းကျယ်ကြီးတစ်ခန်း ၊ ခပ်ငယ်ငယ် လေးယောက် အိပ်တစ်ခန်းကိုတော့ ကိုယ်နဲ့ ကိုဇော်အတွက်နေရာယူပြီး ဒီအခန်းကိုပဲ အစည်းဝေးခန်းအဖြစ်လည်း သုံးမယ် အဲဒီည စည်းဝေးပွဲမှာ - "ကဲ မုဒုံခေါဝ်းဆောင် ရေ" ... မနက်ဖြန်ကစလို့ အားလုံးအတွက် ထမင်းဟင်းချက်တာဝန်ယူပေး ။ တို့မော်လမြိုင်အဖွဲ့ သံဖြူ+ကျိုက္ခမီ အဖွဲ့ တစ်လှည့်စီ တာဝန်ယူမယ် ။ ကိုယ့်အလှည့်ကျတဲ့နေ့မှာ ဟင်းလျာဝယ်ယူ ချက်ပြုတ်စရိတ် ကိုယ့်ဘာသာရှင်းကြေး၊ သဘောတူကြပါတယ်။
နောက်နေ့မနက် စီးလာတဲ့လှေပေါ်က အရန်ရိက္ခာတွေ ကိုယ်တွေအတွက်ပေးခဲ့ ။ နှုတ်ဆက် ပြန်သွားကြပြီ ။ အဲဒီတုန်း ဂိုဒေါင်ရဲ့ တစ်ဖက်စွန်း လှေခါးတစ်စင်းထိပ်က စတိုခန်း ပွင့်လာပြီး လူမတွေ့ရခင် အသံကြားလိုက်ရတယ်။
"မင်းတို့က တပ်ကအာဏာသိမ်းလို့ ဟိုဘက်ကမ်းက ပြေးလာတဲ့ Refugees တွေလား? "
ထောင်းခနဲ ထသွားတဲ့ ဒေါသနဲ့ ခပ်ပြတ်ပြတ်ပြောလိုက်တယ်။
"နိုး နိုး ကျွန်တော်တို့က တော်လှန်ရေးလုပ်ဖို့ ထွက်လာတဲ့ Revolutionaries တွေပါ။ ဒုက္ခသည် Redugees တွေ မဟုတ်ဘူးဗျ"။
ဆက်ရန်. .. .
(၃) ရနောင်းရောက်ကျောင်းသား(400 ခန့် တို့ရဲ့) ခေါင်းဆောင်များအစည်းအ​ဝေး
ကျော်လွင်အောင် - ကော့သောင်း ၊ သုံးဆူနဲ့ ဟွေ့မလိုင်းနေ့ရက်များ Reviewed by MoeMaKa on 10:06 AM Rating: 5